कसरी स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्ने - Victor Mochere
by डार्सी ह्युजेस
मानिस सामाजिक प्राणी हो । हामी केवल आफैंमा फस्टाउन सक्दैनौं - हामीलाई सिर्जना गर्न, निर्माण गर्न, बढ्न र विकास गर्न एक अर्काको आवश्यकता छ। निस्सन्देह, मानव जातिले अब केवल "बाँच्न" आवश्यक छैन, विषम वातावरणीय प्रकोप बाहेक, हामीले अपेक्षाकृत सुरक्षित जीवन बिताउने क्षमतामा महारत हासिल गरेका छौं। हामी मध्ये धेरैले सजिलै आश्रय बनाउन, सफा पानी जम्मा गर्न, र हाम्रो खेतबाट खाना खान सक्छौं। यद्यपि, हामीसँग अझै पनि "आवश्यकता छ" हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य अब यसमा निर्भर छैन।
बरु, यो हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य जोखिममा छ। यसको मतलब हामीलाई फलाउनको लागि स्वस्थ, दिगो सम्बन्ध चाहिन्छ। जब हामी सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्छौं, हामीले आवश्यक रूपमा रोमान्टिक सम्बन्धहरू मात्र होइन। तिनीहरूले तपाईंको परिवार, साथीहरू, सहकर्मीहरू, सहपाठीहरू, वा छिमेकीहरू समावेश गर्न सक्छन्। तपाईंले भेट्नुहुने सबैसँग कुनै न कुनै प्रकारको सम्बन्ध विकास गर्नुहुनेछ, चाहे यो छोटो अवधिको मात्र हो। समुदायको हिस्सा बन्ने यो चाहना यति बलियो र सहज छ कि यसले हामीलाई स्वस्थ नभएको सम्बन्धमा रहन प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
जसले सम्बन्धलाई स्वस्थ बनाउँछ
स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्नका लागि सुझावहरू
एक स्वस्थ सम्बन्ध को लाभ
रातो झण्डा बारे सचेत हुन
हरेक सम्बन्ध अद्वितीय छ, र त्यहाँ सन्तुष्ट वा खुशी महसुस गर्ने एक तरिका छैन। भनिएको छ, त्यहाँ स्वस्थ सम्बन्धमा सामान्य ढाँचाहरू छन् र तिनीहरू प्रायः आदर, समझ र दयामा आउँछन्।
1. अर्थपूर्ण जडान
जब तपाईं कसैसँग समय बिताउनुहुन्छ, चाहे त्यो साथी होस्, परिवारको सदस्य होस् वा रोमान्टिक पार्टनर होस्, तपाईंले तिनीहरूको उपस्थितिबाट भावनात्मक रूपमा पूरा भएको महसुस गर्नुपर्छ। यो अर्थपूर्ण जडान माया गरिएको र माया गरिएको महसुस बीचको भिन्नता हो। अर्थपूर्ण जडान परिभाषित गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर यदि तपाईलाई लाग्छ कि यो व्यक्तिले तपाईलाई सम्मान गर्छ, र तपाईलाई देखेको महसुस गराउने तरिकामा तपाईलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, तब तपाईले त्यो जडान बनाउनुभएको छ।
2. खुला र सम्मानजनक संचार
कसैसँग असहमत हुनु सामान्य हो जबसम्म तपाईं त्यसो सम्मानपूर्वक गर्नुहुन्छ। सम्मानको मतलब यो हो कि तपाइँ अर्को व्यक्तिलाई अपमानित गर्न चाहनुहुन्न, न त उनीहरूको चिन्तालाई खारेज गर्नुहोस्। जब तपाईं आफ्नो असहमति मार्फत कुरा गर्नुहुन्छ, विचार साझा आधार र समझ खोज्नु हो। यदि तपाईं र तपाईंको साथी वा पार्टनरसँग ठूला बहसहरू वा तर्कहरू छन् जसले सफल संचारको नेतृत्व गर्दछ, तब तपाईंको सम्बन्ध अझै पनि स्वस्थ हुन सक्छ। तपाईंले प्रतिशोधको डर बिना अस्थिर भावनाहरू व्यक्त गर्न पर्याप्त सुरक्षित महसुस गर्नुको मतलब यो हो कि तपाईंले यो अर्को व्यक्तिलाई तपाईंलाई बुझ्नको लागि विश्वास गर्नुहुन्छ। यद्यपि, यदि तपाइँ बोल्न डराउनुहुन्छ र अर्को व्यक्तिलाई "जित" गर्न अनुमति दिनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो सम्बन्धमा अस्वस्थ सन्तुलन छ।
3. तपाईं दुई बाहिर चासो
यद्यपि त्यहाँ एक समय हुन सक्छ जहाँ तपाइँ प्रत्येक मिनेट सँगै बिताउन चाहानुहुन्छ, वास्तवमा एक व्यक्तिले तपाइँका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन। तपाइँको पार्टनर तपाइँको प्रेमी, तपाइँको सबैभन्दा मिल्ने साथी, तपाइँको विश्वासपात्र, तपाइँको जिम साथी, र तपाइँ जस्तै सबै समान रुचिहरू भएको आशा गर्नु अस्वस्थ छ। तपाईंको सम्बन्ध बाहिर साथीहरू भएकोले तपाईंलाई आफ्नो शौक र अन्य चासोहरूको आनन्द लिन मद्दत गर्न सक्छ जबकि तपाईंको पार्टनरबाट टाढा तपाईंको पहिचान विकास गर्न सक्छ। तपाईंको आफ्नै पहिचान बलियो राख्नाले तपाईं आफ्नो पार्टनर बिना हुँदा पनि तपाईंलाई पूर्ण महसुस गर्न अनुमति दिन्छ, जुन एक स्वस्थ सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
हामी मध्ये कसैको लागि, सम्बन्ध कायम राख्न सजिलो हुन्छ। तर अरूलाई केही चुनौतीहरू नेभिगेट गर्न हात चाहिन्छ। हामीसँग कसरी स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्ने बारे 10 सुझावहरू छन्। तपाईले जडान गर्न चाहनुभएको व्यक्तिसँग पनि कुरा गर्नुहोस्। यदि तपाईं दुवै एउटै पृष्ठमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंको सम्बन्ध बलियो हुनेछ।
"सम्मान" एक स्वस्थ सम्बन्ध बनाउन र कायम राख्न आवश्यक निर्माण ब्लकहरू मध्ये एक हो। स्वस्थ सम्बन्धमा तपाईंले आदरका यी विशेषताहरू फेला पार्नु पर्छ:
गोपनीयता र ठाउँ - आफ्नो साझेदारको गोपनीयता र एक्लो समयको सम्मान गर्नाले तपाईंले उनीहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र उनीहरूका आवश्यकताहरूको सम्मान गर्नुहुन्छ भनी देखाउँछ।
शारीरिक सीमाहरू - यदि तपाइँको पार्टनर घनिष्ठ हुन चाहँदैन भने, वा तपाइँलाई केहि शारीरिक काम गर्न असहज भएको बताउनुहुन्छ, यो बुझेर र यसबाट बच्न सहमत हुनु सबै स्वस्थ रोमान्टिक सम्बन्धहरूको सम्मानको स्तर हो। यसले तपाइँलाई उनीहरूको सीमाहरू बुझ्दछ भनेर देखाउँदछ
समझौता - आफ्नो पार्टनरको भावना र चाहना बुझ्नु भनेको प्राय: साझा आधार खोज्नु हो। एउटा मुद्दामा सम्झौता गर्दा तपाईं दुवैलाई सहज महसुस गर्न अनुमति दिन्छ, र त्यसैले सम्मान
सम्मानपूर्वक असहमत - सम्मानजनक सञ्चार, तर्कको समयमा पनि, हरेक सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छ। यसले देखाउँछ कि तपाइँ अर्को व्यक्तिको चिन्तालाई सक्रिय रूपमा सुन्न सक्षम हुनुहुन्छ, र तपाइँले उनीहरूलाई आफैलाई व्यक्त गर्न नराम्रो महसुस गर्नुहुन्न।
आदर तपाईंको सम्बन्धको आधारभूत स्तम्भहरू मध्ये एक हुनुपर्छ। गतिशील के हो यसले फरक पार्दैन; तपाईं आफ्नो साझेदार, आमाबाबु, भाइबहिनी, साथी, वा सहकर्मीको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, संलग्न व्यक्तिहरूबाट सम्मान चाहिन्छ। उदाहरणका लागि, आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूबाट आदरको माग गर्ने तर फिर्ता दिन अस्वीकार गर्ने सामान्य छ। जब तिनीहरू यस जालमा फस्छन्, बच्चाले असुरक्षित र अपरिहार्य महसुस गर्दछ।
तिनीहरूले सम्भवतः झूट बोल्न सुरु गर्नेछन्, विच्छेदन गर्नेछन्, वा बदलाको रूपमा आफ्ना आमाबाबुलाई बेवास्ता गर्नेछन्। जब यो रोमान्टिक सम्बन्ध को लागी आउँदछ, rom coms ले संकेत गर्दछ कि तपाईको पेटमा पुतलीको भावनाहरु सबै कुरा हुन्। तर वास्तवमा, यो ज्ञान हो कि कसैसँग तपाईंको पछाडि छ र तपाईंको आवश्यकताहरूको सम्मान गर्दछ जसले सम्बन्धलाई फस्टाउन अनुमति दिन्छ।
२. सक्रिय रूपमा सुन्नुहोस्
सुन्नु सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सीपहरू मध्ये एक हो। यसको अर्थ कसैको भनाइ सुन्नु र कुरा गर्न आफ्नो पालो पर्खनु मात्र होइन; तपाईले पनि बुझ्नु पर्छ र सहानुभूति दिनु पर्छ। सक्रिय श्रोता हुनको लागि, तपाईंले कुराकानीको विवरणहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ, व्यक्तिलाई आफ्नो पूर्ण ध्यान दिनुहोस्, कुनै पनि पूर्वाग्रह वा निर्णयहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्, र उपयुक्त हुँदा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। उदाहरणका लागि, जब तपाइँको पार्टनर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूको भावना र मुख्य बिन्दुहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको मानसिक नोट बनाउनुहोस्।
तिनीहरूलाई अवरोध नगर्नुहोस्, तिनीहरूलाई कुरा गर्न र आफैलाई व्यक्त गर्न अनुमति दिनुहोस्। अवरोध नगर्नमा संलग्न संयम प्रायः सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भाग हो, तर स्पिकरले तपाइँको इनपुटको लागि सोधेसम्म पर्खनु महत्त्वपूर्ण छ। जब तपाइँ प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, तपाइँ सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि, उनीहरूले तपाइँलाई के भनेका छन् भनेर व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। Paraphrasing भनेको जब तपाइँ अवधारणा दोहोर्याउनु हुन्छ तर शब्दहरू होइन। यसले देखाउँछ कि तपाइँ फरक दृष्टिकोणबाट मुद्दा बुझ्नुहुन्छ र तपाइँ मुद्दाको विशेष क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसोभए जब तपाइँ तपाइँको सल्लाह वा टिप्पणीहरू दिनुहुन्छ, तिनीहरू राम्रोसँग प्राप्त हुने सम्भावना छ।
जब हामी सम्बन्धमा स्थिरताको बारेमा कुरा गर्छौं, यसको मतलब यो होइन कि सहजता टेबलबाट बाहिर छ वा तपाईंको व्यक्तित्व कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन। एकरूपता भनेको अर्को व्यक्तिलाई समयसँगै समान सम्मान, भरोसा र मायालु व्यवहार गर्नु हो। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग डिनर पछि गुणस्तरीय समय बिताउन चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूले नियमित रूपमा तिनीहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउने आशा गर्छन्। निस्सन्देह त्यहाँ दिनहरू छन् जहाँ तपाइँलाई केहि ठाउँ चाहिन्छ, तर सामान्यतया उनीहरूले तपाइँलाई निश्चित तरिकाले कार्य गर्ने अपेक्षा गर्न जान्दछन्। यद्यपि, यदि तपाईंले आफ्नो व्यवहारलाई छिटपुट परिवर्तन गर्नुभयो र अनियमित रूपमा बिना कारण उनीहरूसँग समय बिताउने निर्णय गर्नुभयो भने, यसले तिनीहरूलाई फ्याँक्न सक्छ र उनीहरूलाई अस्तव्यस्त महसुस गराउन सक्छ।
4. समर्थन समूहहरू
एक समर्थन समूह दिइएको सम्बन्ध बाहिर साथीहरू मिलेर बनेको छ। स्वस्थ जीवनशैलीमा कम्तिमा दुई समर्थन समूहहरू समावेश हुनुपर्छ। धेरै व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नको लागि, तपाईंले आफ्नो सम्बन्धमा अनुभव गरिरहनुभएको कुनै पनि समस्याहरूको फरक दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा समूह परिवारका सदस्यहरू र अर्को नजिकका साथीहरूको बन्न सक्छ। यो तपाईंको समर्थन समूह बनाउने मित्रता कायम राख्न कडा परिश्रम जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो गहन कार्य हुनु आवश्यक छैन।
कुञ्जी सम्पर्कमा रहनको लागि सक्रिय हुनु हो। महिनामा एक पटक कफीमा आफ्ना साथीहरूसँग भेट्नु भनेको समर्थन प्रस्ताव गर्ने बहुमूल्य मित्रता कायम राख्नको लागि आवश्यक हुन सक्छ। सम्झनुहोस् कि तपाईंले समर्थन समूहका मानिसहरूबाट सल्लाह लिनु पर्दैन, र उनीहरूले पनि तपाईंको लिनु पर्दैन। बस अर्को परिप्रेक्ष्य सुन्नु अन्य सम्बन्ध संग समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न पर्याप्त हुन सक्छ।
यदि तपाईं स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने विश्वास निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। विश्वास भनेको कसैले "सही काम" गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्नु मात्र होइन; यो एक सम्बन्ध मा गहिराई र समझ को संकेत हो। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सम्बन्धहरूमा काट्ने विश्वासका विभिन्न स्तरहरू छन्। आधारभूत विश्वासमा भौतिक सुरक्षा र एकअर्काको सामानको सम्मान समावेश छ। यो विश्वासको गहिरो स्तर विकास गर्न आवश्यक छ, जहाँ तपाइँ भावनात्मक रूपमा अर्को व्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। एक रोमान्टिक पार्टनर वा साथीलाई भावनात्मक रूपमा विश्वास गर्नुको अर्थ हो कि उनीहरूले तपाईंको भावनात्मक कल्याणको ख्याल राख्छन्।
यो विशेष रोमान्टिक सम्बन्ध मा प्रतिबद्धता को अपेक्षा को शीर्ष मा छ। सम्बन्धमा भावनात्मक विश्वास कायम राख्न दुवै व्यक्तिबाट निरन्तर प्रयास चाहिन्छ। यदि तपाईंको पार्टनरले तपाईंको विश्वास गुमाएको छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई यसलाई पुन: प्राप्त गर्ने अवसरहरू दिन विचार गर्न आवश्यक छ। तपाईंले सामना गर्नुभएका समस्याहरूबारे छलफल गर्नुहोस् र प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्, तपाईंले किन दुखित महसुस गर्नुभयो, र विश्वास पुनर्स्थापित गर्न के गर्न आवश्यक छ। यो सबै अगाडि बढ्न र पुन: निर्माण सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ। स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न, तपाईंले दैनिक आधारमा विश्वासमा काम गर्नुपर्छ।
6. सीमाहरू सेट गर्नुहोस् र "होइन" भनी ठीक हुनुहोस्
सीमाहरू सेट अप गर्नुहोस् र आफ्नो पार्टनरलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक छ। मानिसहरू प्राय: अरूको आवश्यकता र चाहनालाई "हो" भन्नु भनेको तपाईं असल साथी वा असल साझेदार हुनु हो भन्ने सोच्छन्। यद्यपि, तपाईलाई सहज नभएका कामहरू लगातार गर्नाले भावनात्मक रूपमा निकास हुन्छ र रिस उत्पन्न हुन्छ। आफ्नो सम्बन्धलाई खुसी र स्वस्थ राख्नको लागि, तपाईंले आफ्नो जीवनमा मानिसहरूलाई बताउन आवश्यक छ जब तपाईं कुनै कुरामा असहज हुनुहुन्छ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ आफ्नो पार्टनरको लागि खाना पकाउन मन पराउनुहुन्छ तर हरेक दिन यो गर्ने आशा गर्नुहुन्न भने, तपाइँ त्यसो भन्न सहज महसुस गर्नुपर्छ। "होइन" भन्नुको अर्थ "कहिल्यै होइन" भन्नु हुँदैन। तपाईले गरिरहनु भएको कुरा तपाईको पार्टनर वा साथीलाई तपाई यस मुद्दामा कहाँ खडा हुनुहुन्छ भनेर थाहा दिनु हो। र सम्बन्धलाई स्वस्थ बनाउनको लागि, अर्को व्यक्तिले तपाइँको सीमाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ।
7. नयाँ अनुभवहरू
सँगै नयाँ चीजहरू गर्नु भनेको सम्बन्धलाई रमाइलो र इनामदायी बनाउन सजिलो तरिका हो। कसैसँग नयाँ अनुभव साझा गर्नु सम्बन्धलाई समृद्ध बनाउने उत्कृष्ट तरिका हो। चाहे यो नयाँ रेस्टुरेन्टमा जाँदैछ, हिँड्न जाँदै, विमानबाट हाम फाल्ने, वा नयाँ शौक लिने हो, साथी वा साथीहरूसँग यो गर्नु भनेको तपाईंले साझा भावनाहरू सँगै अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ अनुभवहरूले दिगो सम्झनाहरू बनाउन पनि नेतृत्व गर्दछ जसले गहिरो बन्धनहरू पनि सिर्जना गर्दछ।
8. स्वस्थ सामाजिक मिडिया प्रयोग
त्यहाँ धेरै लेखहरू अनलाइन छन् जसले सुझाव दिन्छ कि सोशल मिडियाले हाम्रो सञ्चार गर्ने क्षमतालाई बर्बाद गर्नेछ, तर वास्तविकतामा त्यो सत्य होइन। सामाजिक मिडिया टाढा बस्ने साथीहरू र परिवारसँग जडान गर्नको लागि एक अद्भुत उपकरण हो। यसले आला विषयहरूको वरिपरि समुदायहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ जुन अन्यथा पृथक हुनेछ। जब यो तपाइँको सम्बन्ध को लागी आउँदछ, यसले तपाइँलाई बलियो बन्धनहरू विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ किनकि तपाइँ जानकारी साझा गर्नुहुन्छ र तत्काल विचारहरू जुन अन्यथा हराउनेछ।
तर, सामाजिक सञ्जालका केही बेफाइदाहरू छन् जुन उल्लेख गर्नुपर्छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको पार्टनरसँग बलियो स्तरको विश्वास छैन भने, तब तपाइँ ईर्ष्या विकास गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ तिनीहरूलाई अरूसँग जोडिएको देख्नुहुन्छ, विशेष गरी जब यो सोशल मिडियामा छ। अर्को नकारात्मक पक्ष भनेको उनीहरूको सोशल मिडियामा अन्य जोडीहरूको हाइलाइट रिलहरू हेर्दा हामीले गर्ने प्रवृत्ति हो।
तुलना गर्ने जालमा फस्न र अरूसँग तपाईं भन्दा राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने सोच्न सजिलो छ। आफ्नो पार्टनरको exes हेरेर पनि नकारात्मक तुलना विकास गर्न सक्छ। यदि तपाइँ आफैलाई यो नकारात्मक बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो सामाजिक सञ्जालबाट ब्रेक लिनको लागि संकेत हो। याद गर्नुहोस् कि तपाईंको सम्बन्ध वास्तविक संसारमा छ।
9. यथार्थपरक सम्बन्ध लक्ष्यहरू
हामी कसरी कार्य गर्ने र के आशा गर्ने भनेर बुझ्नको लागि हामी वरपरको संसार प्रयोग गर्छौं। जब यो रोमान्टिक सम्बन्ध को लागी आउँदछ, हामी अक्सर हामी कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर पत्ता लगाउन टिभी र चलचित्रहरू प्रयोग गर्दछौं। यद्यपि यी मनोरञ्जनका रूपहरू हुन्। मनोरञ्जनका लागि उनीहरूसँग द्वन्द्व हुन आवश्यक छ, जसको अर्थ हामीले देखेका यी धेरै व्यवहारहरू जानाजानी अस्वस्थ छन्। यी नाटकीय सम्बन्धहरू पछ्याउनुको सट्टा, तपाईंले आफैंमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
आफ्नो पार्टनरसँग इमानदार कुराकानी गर्नुहोस् र उनीहरूलाई सम्बन्धबाट के आशा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। तपाइँको लागि पनि उस्तै जान्छ, तपाइँका विचारहरू साझा गर्न निश्चित हुनुहोस्, ताकि उनीहरूले तपाइँ के चाहनुहुन्छ र के चाहिन्छ भनेर बुझ्ने मौका पाउनुहुनेछ। जब तपाईं दुवैले खुला रूपमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो बाटोमा आउन सक्ने अवरोधहरू मार्फत एकअर्कालाई मद्दत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो धेरै प्रकारका लक्ष्यहरूको लागि जान्छ, आर्थिक देखि बच्चा जन्माउन सम्म। तपाईंको सम्बन्ध लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि, दुबै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको सफलतामा लगानी गर्न आवश्यक छ।
10। दयालु बन
समग्रमा, स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सल्लाह दयालु हुनु हो। दया र समानुभूति तपाईको वरपरका मानिसहरूलाई बुझ्नको लागि उत्तम तरिका हो। उनीहरूलाई परिस्थितिमा कस्तो महसुस हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउनु, र उनीहरूलाई खुसी बनाउन चाहनु भनेको स्वस्थ सम्बन्धको पछाडि चालक शक्तिहरू हुन्। कसैको इच्छाको आदर गर्नु दयालु हुनुको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
जब तपाइँ सक्रिय रूपमा तपाइँको साथी वा साझेदारको कुरा सुन्नुहुन्छ, तपाइँ पनि उनीहरूलाई तपाइँसँग व्यक्त गर्न अनुमति दिएर दयालु अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। इमानदारी दयाको अर्को रूप हो। यद्यपि यो तपाईंको पार्टनर वा साथीलाई उनीहरूले के सुन्ने आशा गर्दै छन् भनेर बताउन सजिलो हुन सक्छ, तिनीहरूलाई समानुभूतिको ठाउँबाट सत्य बताउन स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक छ।
जब तपाईं एक स्वस्थ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, तपाईं अद्भुत अनुभवहरूको असंख्य आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
1. तनाव नेभिगेट गर्दै
जब तपाईं खुसी र स्वस्थ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, तपाईं तनावको सामना गर्न बढी सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईंसँग मानिसहरूसँग भएको सम्बन्धले तपाईंलाई आफ्नो वातावरणमा सुरक्षित र सुरक्षित महसुस गर्न अनुमति दिन्छ, र यो भावना शारीरिक रूपमा अनुवाद हुन्छ। सुरक्षाको यो अनुभूतिको कारणले गर्दा तपाईले कम कोर्टिसोल (एक तनाव हार्मोन) उत्पादन गर्न थाल्नुहुन्छ। निस्सन्देह, जीवनले तपाईलाई कागती फ्याँक्नेछ, तर राम्रो समर्थन प्रणालीले तपाईलाई यी समस्याहरूको सामना गर्न मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईंको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने, तपाईंले जीवनको तनावसँग व्यवहार गर्दा बलियो महसुस गर्नुपर्छ।
जब तपाईं खुसी, समर्थित, र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईंको शरीरलाई आफैमा ध्यान केन्द्रित गर्न समय दिइन्छ। अचम्मलाग्दो कुरा, अनुसन्धानले देखाउँछ कि लामो समयसम्म रोमान्टिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू अविवाहितहरूको तुलनामा3गुणा बढी हृदय शल्यक्रियाबाट बच्ने सम्भावना हुन्छ। यो किनभने तिनीहरूको शरीरलाई थाहा छ कि तिनीहरू आफ्ना प्रियजनहरूको वरिपरि हुँदा आराम गर्न सक्छन्। यदि बिरामी एक्लै भए, उनीहरूलाई समर्थन गर्ने समुदाय बिना, उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा बढी चिन्ता लिनुपर्ने थियो।
बिलहरू, खाना, र घर मर्मतसम्भार केही चीजहरू हुन् जुन असमर्थित व्यक्तिको दिमागमा चल्नेछ। तपाईंलाई मद्दत र समर्थन गर्न त्यहाँ अर्को व्यक्तिको साथ, तपाईंको शरीर आराम गर्न सक्छ। उस्तै तपाईको महत्त्वपूर्ण अर्को वरिपरि बस्नको लागि जान्छ। आफूले मन पराउने व्यक्तिसँग समय बिताउँदा तपाईंले महसुस गर्नुहुने आनन्द तपाईंको हर्मोनलाई प्रभाव पार्ने बलियो हुन्छ। फलस्वरूप यसले तपाईंको शरीरका तत्वहरूलाई परिवर्तन गर्छ। उदाहरण को लागी, आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढावा वा आफ्नो रक्तचाप कम।
निस्सन्देह, तपाईं स्वस्थ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भन्ने मुख्य संकेत तपाईंले महसुस गर्नुभएको आनन्दको मात्राबाट आउँछ। एक स्वस्थ सम्बन्ध नकारात्मक भावनाहरु को छर्कने संग अधिकतर खुशी छ। जब ती वर्षा बादलहरू आउँछन्, तपाईंले समस्याको माध्यमबाट कुरा गर्न र समझमा आउन सक्षम हुनुपर्दछ। त्यहाँ सान्त्वना र शान्तको भावना छ जुन तपाई यस व्यक्तिसँग खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा आउँछ। तपाईं पूर्ण रूपमा आफै हुन सक्नुहुन्छ, र त्यो परम खुशी हो।
तपाईंको सम्बन्ध जस्तोसुकै देखिने कुराले फरक पार्दैन, तपाईंले पूर्ण, खुशी र बुझेको महसुस गर्नुपर्छ। जब तपाईं यस व्यक्तिको वरिपरि हुनुहुन्छ भने चिन्ता र संकटको भावनाले तपाईं संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भनेर संकेत गर्न सक्छ। जसरी स्वस्थ सम्बन्धमा रहन कुनै एक तरिका छैन, त्यहाँ कुनै एक मुद्दा छैन जसले तपाइँको मित्रता वा रोमान्टिक सम्बन्धलाई खराब घोषणा गर्न सक्छ।
तपाईलाई यस समयमा नेभिगेट गर्न मद्दतको लागि, हाम्रो "रातो झण्डाहरू" पढ्नुहोस्। हामी तिनीहरूको अर्थ के हो, तिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने, र तपाईंको सम्बन्ध सुधार गर्न सुझावहरू व्याख्या गर्नेछौं। यी समस्याहरू थाहा पाउँदा एक पतन जडान पुन: प्राप्त गर्न मात्र होइन, तर यसले चट्टान प्याचमा हिट भएको स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ।
1. प्रेम बम विस्फोट
प्रेम बम विस्फोट एक अपेक्षाकृत नयाँ मुद्दा हो जुन आधुनिक सम्बन्ध संग संघर्ष गर्दछ। यो सामान्यतया नयाँ रोमान्टिक सम्बन्धहरूमा हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ यी संकेतहरू झगडा पछि पनि आउँछन्। प्रेम बम विस्फोट हो जब कोही तपाइँको सम्बन्ध मा अत्यधिक लगानी हुन्छ। तिनीहरूले तपाईंलाई स्नेह, ध्यान, प्रेमको घोषणाहरू, र अरू कुनै पनि कुराले तपाईंलाई तिनीहरूमा झुण्ड्याउनको लागि वर्षा गर्छन्। यो तीव्रताले तपाईंलाई आकर्षित गर्छ र तपाईंको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भनेर एक विकृत दृष्टिकोण दिन्छ।
जब प्रेम बम्बरले उनीहरूको उत्साहलाई कम गर्दछ, तपाईं दुई बीचको स्नेहमा ठूलो खाडल देखा पर्दा तपाईं हृदयविहीन हुनुहुन्छ। यो प्लेटोनिक, रोमान्टिक, र पारिवारिक सम्बन्धमा समान रूपमा हुन सक्छ। जब तपाइँ तपाइँको व्यक्तिलाई सोध्नु हुन्छ किन चीजहरू परिवर्तन भएको छ, प्रेम बमवर्षक रक्षात्मक हुन्छ, दावी गर्दछ कि तपाइँ "चिप्पी" हुनुहुन्छ। चक्र जारी रहन्छ जब बम विस्फोट एक नार्सिसिस्ट व्यक्तित्वबाट भावनात्मक रूपमा अपमानजनक व्यवहारको शिकार हुन्छ।
यदि तपाईंले यी व्यवहारहरू क्रप भइरहेको देख्नुभयो भने, आफ्नो साथी वा साथीसँग सीमाहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। सायद तपाईंले उल्लेख गर्नुपर्छ कि तपाईंलाई स्नेह महसुस गर्न धेरै उपहारहरू आवश्यक पर्दैन, वा हुनसक्छ तपाईं सम्बन्धलाई बिस्तारै लिन चाहनुहुन्छ। यो ढिलो गति सेटअप गर्नाले तपाईंलाई एन्डोर्फिनको खुराक बिना व्यक्तिको रूपमा हेर्न अनुमति दिन्छ। र यसले प्रेम बम्बरलाई तपाइँ कसरी माया गर्न चाहनुहुन्छ भनेर बुझ्न अनुमति दिन्छ।
2. सामाजिक मिडिया संग लगातार तुलना
सामाजिक सञ्जालमा हुनु तत्कालै रातो झण्डा होइन। अनलाइन सञ्चार गर्नाले मानिसहरूसँग अविश्वसनीय जडान सिर्जना गर्न सक्छ जुन तपाईंले अन्यथा भेट्नु भएको छैन। यद्यपि, त्यहाँ एक सीमा छ। अरू मानिसहरूले सधैं के गरिरहेछन् भन्ने देख्दा तपाईंलाई आफ्नो वरपरको संसारको झूटो छवि दिन सक्छ। यदि कसैले जिममा लगातार उनीहरूको तस्बिरहरू पोस्ट गर्दैछ भने, यसको मतलब यो होइन कि उनीहरू हरेक दिन कसरत गरिरहेका छन्, र यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले कसरत सजिलो पाउँछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको जीवनले यी तस्बिरहरूको समान ढाँचालाई पछ्याउँदैन।
तपाईंको खाली समय र वित्त एक सामाजिक प्रभावकर्तासँग मेल खाने सम्भावना छैन जसको काम काम गर्नु हो। यस कारणले गर्दा, तपाईंले आफूलाई अनलाइन पोष्ट गरिएका तस्बिरहरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन। यद्यपि, यदि तपाईंले याद गर्नुभयो कि तपाईंको साझेदारले यी अनलाइन तथ्याङ्कहरूसँग आफूलाई निरन्तर तुलना गर्छ भने, यो रातो झण्डा हुन सक्छ। कम आत्म-सम्मान भएका मानिसहरू यस श्रेणीमा पर्छन्। तिनीहरूको आफ्नै असुरक्षाको कारणले गर्दा तिनीहरू हरेक सानो विवरणमा पागल हुन सक्छन्।
तपाईं नकारात्मकता तिनीहरूको जीवनका अन्य पक्षहरूमा फैलिने आशा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं र तिनीहरूबीच समस्याहरू निम्त्याउँछ। उदाहरणका लागि, उनीहरूले तपाईंलाई लुगा फेर्न, तौल घटाउन वा आफ्नो व्यक्तित्व लुकाउन, अनलाइन राम्रो देखिन सोध्न सक्छन्। यदि तपाईंले यो तलतिर सर्पिल भएको देख्नुभयो भने, सामाजिक सञ्जालबाट विश्राम लिनुहोस् र यसको सट्टा आत्म-प्रेम अभ्यास गर्नुहोस्। यसको अर्थ तपाईको र उनीहरुको जीवनका ठूला भागहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, सामना गर्नुपर्ने चुनौतिहरूको लागि ढिलो दिनु र तपाई दुवैलाई निर्णयविना बाँच्न अनुमति दिनु हो।
3. तपाईं एकअर्कालाई बुझ्नुभएको जस्तो लाग्दैन
सञ्चारको कमी नै सम्बन्धबाट बाहिरिने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो। गलतफहमीले भ्रममा पार्न सक्छ र भावनाहरूलाई चोट पुर्याउन सक्छ। यद्यपि यसको मतलब तपाईको साथी, साझेदार, वा परिवारको सदस्य खराब व्यक्ति हो भन्ने होइन, म सुझाव दिन सक्छु कि तपाईसँग पहिले भएको जडान फिक्का हुन थालेको छ। सामान्यतया, गलत सञ्चार तब हुन्छ जब एक व्यक्तिले अर्कोले उस्तै माया देखाएको अपेक्षा गर्दछ। यद्यपि, मानिसहरूले विरलै प्रेमलाई समान रूपमा अनुभव गर्छन्।
एक व्यक्तिले उपहार दिएर प्रेम देखाउन सक्छ; यद्यपि, अर्कोले सोच्न सक्छ कि यो "तिनीहरूलाई किन्ने" तरिका हो। अर्कोले स्वर पुष्टि गरेर प्रेम देखाउन सक्छ, तर अर्कोले यो "नक्कली र चीज" हो भन्ने सोच्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई तपाईं कसरी माया गर्न चाहनुहुन्छ भनेर थाहा पाउने आशा गर्नु हुँदैन। बरु, तपाईंले सम्बन्धमा के रमाइलो गर्नुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् र आफ्नो साथी, रोमान्टिक पार्टनर, वा परिवारको सदस्यलाई व्याख्या गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले अर्को व्यक्तिलाई सोध्नु पर्छ कि उनीहरूलाई के चाहिन्छ।
4. चरम भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू
यदि कसैले आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने, यो ठूलो रातो झण्डा हो। यदि सबैभन्दा सानो मुद्दाले उनीहरूलाई हिंसक क्रोधमा पठाउन सक्छ भने, तपाइँ त्यस व्यक्तिबाट टाढा रहन जान्नुहुन्छ, किनकि तपाइँलाई चोट लाग्न सक्छ। यद्यपि, नियन्त्रण गुमाउने एक भन्दा बढी तरिकाहरू छन्। यदि कसैले तपाईलाई आफ्ना भावनाहरूको बारेमा कुरा गर्नुको सट्टा "मौन उपचार" दिन्छ भने, तब तिनीहरूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने असक्षमताको अनुभव गरिरहेका छन्। ह्यान्डलबाट उड्नुको सट्टा, तिनीहरूले तपाईलाई सजायको रूपमा सबै कुरा बन्द गर्न सक्छन्।
यो एक प्रकारको भावनात्मक दुर्व्यवहार हो। दुबै परिदृश्यहरूमा, व्यक्तिमा समानुभूतिको कमी छ। तिनीहरू या त तपाईंको भावनाहरूबाट अनभिज्ञ छन्, वा तिनीहरूले जानाजानी तिनीहरूलाई चोट पुर्याउन चाहन्छन्। समानुभूतिपूर्ण हुनुको अर्थ कसैलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भनेर जान्न भन्दा बढी हुन्छ; यो ती भावनाहरूको पनि हेरचाह गर्ने बारे हो। एक समानुभूतिशील व्यक्ति अझै पनि आफ्नो जीवनमा चीजहरूको बारेमा चिन्तित हुनेछ, तर उनीहरूलाई थाहा छ कि कुटपिटले उनीहरूको वरपरका मानिसहरूलाई हानि पुर्‍याउँछ। यस कारण, तिनीहरू आफ्नो भावना संग बस्न को लागी एक क्षण लिन्छन्।
उनीहरूले के महसुस गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न सिक्छन् र समस्या समाधान गर्न स्वस्थ तरिका खोज्छन्। तिनीहरू जान्दछन् कि चिच्याउने र कराउनले मात्र थप समस्याहरू सिर्जना गर्दछ र तिनीहरूले ख्याल गर्ने मानिसहरूलाई चोट पुर्याउँछ। यद्यपि, केवल किनभने कसैले आफ्ना भावनाहरू नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेको छ यसको मतलब यो होइन कि तपाईं तिनीहरूको वरिपरि हुनुहुँदैन। यदि तिनीहरू परिवर्तन गर्न इच्छुक छन् भने, तिनीहरूले आफ्नो परिप्रेक्ष्य समायोजन गर्न र भावनाहरू उच्च हुँदा कसरी एक कदम फिर्ता लिने भनेर बुझ्न सिक्न सक्छन्।
समानुभूति एक सिकाइएको सीप हो, र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नको लागि सबैले समान पालनपोषण वा वातावरणको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न। समानुभूति हुने पहिलो चरण भनेको अरू मानिसहरूलाई बुझ्नु हो। यसको मतलब फरक संस्कृति (LGBTQ+ पुस्तकहरू, विभिन्न जातजाति, धार्मिक समूहहरू, इत्यादि) लाई लक्षित गरी पुस्तकहरू पढ्न वा टिभी कार्यक्रमहरू हेर्ने हुन सक्छ। संसारलाई अर्को तरिकाले बुझ्नको लागि यात्रा अर्को तरिका हो। र अन्तमा, सक्रिय रूपमा सुन्नु (जस्तै हामीले पहिले भने) अर्को व्यक्तिको दृष्टिकोणमा साँच्चै लिनको लागि उत्तम तरिका हो।
ग्यासलाइटिङ तब हुन्छ जब कसैले अर्को व्यक्ति वा मानिसहरूको समूहलाई उनीहरूले केही गरेको (वा केही नगरेको) विश्वास दिलाउन प्रयास गर्छ जब विपरीत सत्य हो। यो शब्द पहिलो पटक 1938 को नाटक ग्यास लाइट देखाइए पछि देखा पर्‍यो (यो 1944 मा चलचित्रमा परिणत भएको थियो)। यस नाटकमा एक पुरुषले आफ्नो धनको लागि धनी महिलासँग विवाह गर्छन्। उनको परिवारले गहना लुकाएर राख्यो, जसले उनलाई रिस उठ्यो। पैसामा आफ्नो हात प्राप्त गर्न, श्रीमानले ग्यास बत्तीहरू झिलिमिली गर्न बाध्य पार्ने मेकानिकल कन्ट्रपसन गरे।
उनकी श्रीमतीले चम्किरहेको बत्तीको बारेमा गुनासो गर्थिन्, तर उसले भन्यो कि उसले चीजहरू कल्पना गरिरहेको थियो। अन्ततः, उसले उनलाई विश्वास दिलायो कि उनी पागल छिन्। उनलाई शरणमा पठाइयो, र उसले उनको गहनाहरूमा हात राख्यो। वास्तवमा, ग्यासलाइटरले तपाईंलाई चीजहरू बिर्सेको जस्तो महसुस गराउँदछ; तिनीहरूले तपाईंका भावनाहरूलाई बदनाम गर्छन् र स्थितिलाई घटाएर तपाईंका भावनाहरूलाई तुच्छ बनाउँछन्। तिनीहरूले तपाईंलाई अक्सर "ओभरड्रामेटिक" भन्नेछन्।
यदि तपाईंले आफ्नो पार्टनर, साथी, वा परिवारको सदस्यले तपाईंलाई ग्यासलाइट गरिरहेको देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूको सामना गर्नुपर्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न परिस्थितिको प्रमाण देखाउन आवश्यक हुन सक्छ। र यदि तपाईं सम्बन्ध सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई सोध्नु पर्छ किन तिनीहरूले झूट बोल्न आवश्यक महसुस गरे। जसरी कोही जन्मजात समानुभूतिपूर्ण हुँदैन, एक ग्यासलाइटर प्रायः आफ्नो भावनाहरू व्याख्या गर्न असमर्थ हुन्छ।
तिनीहरू एक वातावरणमा हुर्केका हुन सक्छन् जहाँ तिनीहरूका आवश्यकताहरू अमान्य मानिन्थ्यो, त्यसैले तिनीहरूले आवश्यक पर्ने कुराहरू प्राप्त गर्न यो विधि विकास गरे। खुला सञ्चारको लागि ठाउँ सिर्जना गर्नु र तिनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गर्नको लागि आफ्नो समय निकाल्न अनुमति दिंदा तपाईंलाई यो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि, तपाईंले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई जोखिममा राख्नु हुँदैन। यदि चीजहरू धेरै अप्ठ्यारो हुन्छन् भने, तपाईंले आफैंलाई पुन: स्थापित गर्नुपर्छ र घटनाहरूको तपाईंको संस्करणमा विश्वस्त रहनु पर्छ।
जब यो तल आउँछ, एक स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न सम्मान, विश्वास, र संचार आवश्यक छ। यो सम्बन्ध रोमान्टिक, प्लेटोनिक, वा पारिवारिक हो भने फरक पर्दैन; तिनीहरू सबैलाई सफल हुनको लागि यी मूल मानहरू चाहिन्छ। स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्न सधैं सजिलो हुँदैन, चाहे त्यो मित्रता होस् वा विवाह। त्यहाँ कुनै द्रुत समाधान छैन र त्यहाँ अवरोधहरू हुनेछन् तर मुख्य कुरा चीजहरू काम गर्न प्रयासमा राख्नु हो। यदि तपाइँ आफैलाई एक तर्क पछि पर्खाल लगाउनु भएको छ भने, एक कदम पछि हट्नुहोस् र सक्रिय सुन्नमा संलग्न हुन सम्झनुहोस्।
त्यो पर्खाल तल तान्न गाह्रो हुन सक्छ, तर प्रतिक्रियाको सट्टा सुन्नको लागि समय निकाल्दा तपाईंलाई अर्को व्यक्तिलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि अन्तरदृष्टि दिन सक्छ। सधैं दयालु हुन सम्झनुहोस् र आफैलाई र सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिको सम्मान गर्नुहोस्। जब चीजहरू नराम्रो देखिन थाल्छन्, त्यो आधारभूत स्तरको सम्मानले तपाईंलाई आँधीबेहरी बितिसकेपछि फर्काउन मद्दत गर्नेछ। यी सुझावहरू स्वस्थ सम्बन्ध कायम राख्नका लागि तपाईंको टुलकिट हुन्, तिनीहरूलाई सम्झनुहोस्, र तिनीहरूलाई प्राय: अभ्यास गर्नुहोस्।